Real Madrid oo Xiisihii Kylian Mbappe u Weycisay Xidiga Erling Braut Haaland'
Home Horyaalka France Real Madrid oo Xiisihii Kylian Mbappe u Weycisay Xidiga Erling Braut Haaland’
Real Madrid oo Xiisihii Kylian Mbappe u Weycisay Xidiga Erling Braut Haaland’
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa diiradda saari doonaan saxiixa xidiga Borussia Dortmund ee Erling Braut Haaland ka dib markii Kylian Mbappe uu si maldahan u sheegay in uu diyaar u yahay heshiis cusub uu u saxiixayo Paris Saint-Germain .
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Faransiiska ayaa la rumeysan yahay in la geliyay booska koowaad ee liiska ciyaartoyda ay dooneyso Los Blancos ka hor suuqa xagaaga.
Mbappe wuxuu heystaa 18 bilood oo qandaraaskiisa PSG ah, taasoo ku qasbi karta kooxda reer France inay lacag kaash ku bixiso dhamaadka xilli ciyaareedka ama ay halis ugu jirto inay lumiyaan xiddigooda weerarka oo bilaash ah.
Si kastaba ha ahaatee, ku guuleystaha Koobka Adduunka ayaa ku celceliyay usbuucii la soo dhaafay inuu “aad ugu faraxsan yahay” joogitaanka Parc des Princes, waxaana haatan la filayaa inuu heshiis cusub u saxiixo kooxda kaasi oo waqti dheer ah.
Sida laga soo xigtay warbixin ay daabacday Daily Express , Madrid ayaa bedelkeeda mudnaanta siin doonta saxiixa xiddiga kooxda Dortmund Haaland.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Norway Haaland ayaa lagu xamanayaa inuu qandaraaskiisa lagu burburin karo € 75m (£ 66.59m).
Previous articleFrank Lampard oo ka hadlay Shaqada laga ceyriyay iyo in aan la siinin Waqti
Next articleWararka Xanta Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee maanta: Dzeko, Lingard, Alli, Draxler, Mustafi, Veron, Gray